Ubuchwepheshe, Amakhono kwezamabhizinisi Management
Ngo Synergy ne-Mission IEAGE, ukusetshenziswa okunengqondo kobuchwepheshe ezifanele ukuze inhlangano ka simo ngasinye, kuye ngezidingo zabo kanye nemithombo akhona, kubhekwa a ebucayi ukuphumelela factor futhi sisekelwe imibono ekwenza elandelayo:
Ukusetshenziswa ubuchwepheshe obusha akuseyona inketho ezweni globalized, Ayikho nemingcele and oxhumene;
Kusukela ngesikhathi sokuqala, business plan ocwaningweni kanye abheke ukuthi kungenzeka, noma yisiphi isinyathelo ebhizinisi, one Angeke bakhohlwe ukucabangela imvelo kwezobuchwepheshe njengoba ithuluzi usekela izinjongo zayo Injongo namabhizinisi;
Godu, ukusebenza ibhizinisi, yabo bonke ubukhulu, futhi uhla ethile ngezindlela ezithile, kweyeme ubuchwepheshe ilwazi kanye nokuxhumana;
Ukuthuthukiswa kwe-izinhlelo Ngenxa imvelo lebhizinisi, resources human kanye nezinqubo ekhona kungukuthi ugcwalise size cabanga best iphila futhi abathile solution lobuchwepheshe for profile inkampani ngayinye.
On ukusebenza inkampani yansuku zonke, Umbono systemic uyobe kuphela siphumelele ukuba avumele analysis and nokuqapha okuqhubekayo futhi ukunquma Amaqhinga kanye namasu nokulungiswa ezidingekayo uma kukhona ukulingana phakathi nezici eziyisisekelo yilezi: izinqubo, Abantu, ubuchwepheshe kanye nemvelo kwangaphandle.
Inhloso ka Technology of IEAGE enakekela ukuthuthukisa isimo, izindlela kanye nezixazululo, aggregating ubuchwepheshe ekhona kanye nemikhiqizo, noma ukuthuthukisa entsha, ukuze sikwazi ukuqeqesha osomabhizinisi kanye nabasebenzi bawo.
I IEAGE futhi ihlose ukunikeza izindlela nokusheshisa futhi ukuhambisana osomabhizinisi amasha kanye, concomitantly, Amabhizinisi sedimentary okhona, izindawo ekusetshenzisweni web kanye mobile ukuthi lula futhi zikhuthaza ukuthintana ebhizinisi nge ikhasimende lakho.
Ngokwesiprofetho Nesta, imizamo igunya IEAGE bagxile ekuthuthukiseni:
Distance imvelo ukufunda ngokugxila ezindabeni zokuphathwa nezamabhizinisi ukukhuthaza ukuqeqeshwa amakhono;
Business imvelo, likhuthaza imikhiqizo namasevisi ngenjongo osomabhizinisi kanye kudalwa izindlela ukwenza lula zokuxhumana, eziphakathi osomabhizinisi;
Idatha Big for ukuhlaziya of Macro kwemvelo kwezomnotho kanye emakethe Amathrendi, ukunikeza ulwazi mayelana osomabhizinisi imizamo yabo futhi target izimakethe.
← Ukuphathwa kanye Consulting
Amaqembu Research →
Italicahomes – Ukuthenga indlu futhi villa e Tuscany futhi Italy